TPCH waxay siidaynaysaa 'ku dadaalida cadaalada jinsiyadeed: Wicitaan Ficil' iyadoo lala kaashanayo Jaamacadda Arizona ee Koonfur-galbeed Machadka Cilmi-baarista Haweenka iyo Magaalada Tucson Guryeynta & Waaxda Horumarinta Bulshada - Tucson Pima Iskaashiga si loo soo afjaro Hoyla'aanta
TPCH waxay sii deysaa 'ku dadaalida cadaalada jinsiyadeed: Wicitaan Ficil' iyadoo lala kaashanayo Jaamacadda Arizona Machadka Koonfur-galbeed ee Cilmi-baarista Haweenka iyo Magaalada Tucson Guryeynta & Waaxda Horumarinta Bulshada
by	Jason Thorpe	/ Khamiista, 04 Noofambar 2021	/ Published in Community, Featured, Hada Farxad
TPCH waxay siidaynaysaa "U dadaalida Cadaalada Jinsiga - Wicitaan Ficil" iyadoo lala kaashanayo Jaamacadda Arizona Machadka Koonfur-galbeed ee Cilmi-baarista Haweenka iyo Magaalada Tucson Guryeynta & Waaxda Horumarinta Bulshada
Ku Dadaalida Cadaalada Jinsiga waa baaq waxqabad oo loogu talagalay ururada bulshada ku salaysan ee Koonfurta Arizona. Iyadoo ururo badan ay sameeyeen go'aan ku saabsan caddaaladda jinsiyadeed, ficilku wuu gaabiyey in la raaco. Ku Dadaalida Cadaalada Jinsiga waxay siisaa agab iyo talooyin ururrada maxalliga ah si ay u tarjumaan ka go'naanta waxqabadka iyo natiijooyinka.
Hase yeeshe, baaqan ficilka ah (CTA) wuxuu bixiyaa macluumaad toos ah oo ku saabsan sida ay lagama maarmaanka u tahay in wax laga qabto caddaalad-darrada jinsiyadda, iyo xeeladaha ururrada Degmada Pima ay hirgelin karaan si ay wax uga qabtaan sinnaan-la'aanta jinsiyadda. Ururada (ay ku jiraan macaamiishooda, xubnaha bulshada, shaqaalaha iyo hogaanka) ayaa ugu haboon inay go'aamiyaan qorshahooda ugu fiican, daneeyayaashana waa inay u shaqeeyaan si wada jir ah, iyo shuraako siman. Ururo badan ayaa laga yaabaa in ay durba bilaabeen shaqada cadaalada jinsiyadeed, laakiin waxa laga yaabaa in ay dareemaan in dadaalkooda uu hakad ku jiro, ama in dadaalladu ay noqdeen kuwo aan waxtar lahayn.
Hordhac Virtual ah oo loogu dadaalayo Cadaaladda Jinsiyadda - Noofembar 30, 11 subaxnimo-12 galabnimo
Ku biir TPCH iyo Jaamacadda Arizona ee Koonfur-galbeed Machadka Cilmi-baarista Haweenka 60-daqiiqo dulmar guud oo toos ah oo ku saabsan u dadaalida Cadaaladda Jinsiyadda, ficillada la soo jeediyay, iyo xeeladaha ururada bulshadu ay qaadi karaan si ay u hormariyaan ficilka iyo natiijooyinka caddaaladda jinsiyadda.
Halkan iska diwaangeli 60-daqiiqo hordhaca CTA.
Waxqabadyada la soo jeediyey
CTA waxay siisaa macluumaadka aasaasiga ah iyo xeeladaha ururada maxalliga ah si ay ugu lug yeeshaan 7 ficil oo muhiim ah si loo horumariyo caddaaladda jinsiyadda:
Ficilka 1-aad – Hoggaanka Ururku wuxuu si guud u ballan qaadayaa Cadaaladda Jinsiyadda
Talaabada 2 – Shaqada Cadaalada Qowmiyada Wadareed ee Ururka dhexdiisa
Tallaabada 3 - Shaqada Cadaaladda Jinsiyada Shakhsi ahaaneed
Tallaabada 4 - Go'aami natiijooyinka la rabo
Tallaabada 5 - Dhis Cadaalad Jinsi iyo/ama Iska yaree waxyeelada
Ficilka 6 – U heellan la xisaabtanka
Ficilka 7 – Qabso Socdaalka, Sii wad Shaqada
Ficilada la soo jeediyay ee Ku Dadaalida Cadaalada Jinsiga waxaa laga yaabaa in ay gacan ka geysato dib u soo celinta kooxaha ama ay bixiso qaab shaqadan. Baadhista iyo ururinta xogta farqiga jinsiyadeed ee ka dhex jira gudaha shaqaalaha iyo dibadda kooxaha macmiilka waa qayb muhiim ah oo ka mid ah habka. Si kastaba ha ahaatee, ururadu waa in ay iska caabiyaan in ay ku milmeen xog ururinta iyo habka imtixaanada. Iyadoo tirada badan ee ururrada xogta ay inta badan ururiyaan, falanqayn kasta waxay u badan tahay inay horseedi doonto su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha xogta kuwaas oo dib u dhigi kara ficil iyo shaqo la taaban karo.
Dhisida Dadaalka Maxaliga ah iyo Khibrada
Bulshooyinka ku nool degmada Pima ayaa aad ugu nasiib badnaa inay heleen fursado badan oo ay kaga qayb qaadan karaan kala duwanaanshiyaha, sinnaanta iyo tababarada ka mid noqoshada bixiyayaasha caawimada farsamada qaranka (TA). Intaa waxa dheer, waxa jira qalabyo badan iyo agabyo kale oo diyaar ah oo laga heli karo onlayn (badankoodu waxa lagu taliyaa CTA). CTA-dani waxay ka timi bulshadeena dhexdeeda waxaana horumariya dadka fahmaya gobolkeena, iyo dhammaan waxyaalaha qalafsanaantiisa. Xeeladahan la soo jeediyay waxaa soo saaray dadka ka soo shaqeeyay gudaha, macaamiisha u ahaa, oo si qoto dheer u danaynaya Tucson gurigoodu ahaan.
Waxaa mahad ballaaran leh inaan uga mahadcelinno kooxdan xoogga badan ee hoggaamiyeyaasha sida ay waqtigooda, khibraddooda iyo maskaxdooda geliyaan CTA-da, iyo hoggaamiyeyaasha soo socda ee isticmaali doona CTA-da si ay u burburiyaan oo ay dib ugu dhisaan ururro loo siman yahay.
Mahad gaar ah ayaa leh Jaamacadda Arizona Southwest Institute for Research on Women u hoggaankeeda abuurista CTA iyo qorayaasha CTA: